ဘောလုံးဟောကိန်းများ Portland Timbers vs Los Angeles FC 22 July 2021
1xPlayz (73.84% ရေနံချောင်း / 864) Los Angeles FC အနိုင်ရသူ
BallkhmerBettor (52.46% ရေနံချောင်း / 650) Portland Timbers အနိုင်ရသူ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Portland Timbers vs Los Angeles FC ဒီ၏ Jul 22, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် ယူအက်စ်အေဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘောလုံး 2021
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Portland Timbers vs Los Angeles FC?
ယူအက်စ်အေဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘောလုံး 2021 ဒီနေ့ခန့်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Portland Timbers vs Los Angeles FC အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ ယူအက်စ်အေဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘောလုံး 2021 of Jul 22, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Portland Timbers အနိုင်ရ၊ Los Angeles FC အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် D. Váleri
အစားထိုး C. Paredes
အားဖြင့် G. Fochive
အစားထိုး D. Asprilla
အားဖြင့် M. Loría
အစားထိုး C. Baird
အားဖြင့် Kim Moon-Hwan
အစားထိုး R. Edwards
အားဖြင့် D. Palacios
အစားထိုး B. Duke
အားဖြင့် F. Ginella
အစားထိုး F. Mora
အားဖြင့် J. Ebobisse
အစားထိုး S. Blanco
အားဖြင့် Y. Chará
အစားထိုး B. Rodríguez
အားဖြင့် C. Vela
အစားထိုး B. Bodily
အားဖြင့် P. Bonilla
၏ရည်မှန်းချက် F. Mora